Magaalada daraya oo ay isaga baxayaan dadki ku dhaqana – The Voice of Northeastern Kenya
Magaalada daraya oo ay isaga baxayaan dadki ku dhaqana
starfmke August 27, 2016
Dadka deeganka iyo dagalyahanada mucaaradka ee ka soo horjeeda jiritaanka xukumadda Dimishiq ayaa waxa ay bilaaben in ay isaga baxaan magaalada daraya si go’doonka mudada dheer ay magaaladaaas ku jirtay loo soo afjaro.
Kolonyo mucaawinad u fidinaayay dadka isaga qaxaayay magaaladaas ayaa waxa ay gudaha u galeen magaladaas go’doonka ku jirtay muda dhan 5 sano maalinta shalay ahayd ee jimca ku beegneyd.
Talaabadan ayaa daba socota kadib marki Dagaalyahanada mucaaradka iyo xogaga dawladda ay isku waafaqen in magaladaas oo ay ku hareereysnaayen ciidamada dawladda tan iyo sanadki 2012-ka in go’doonka ay ku jirtay laga qaado.
Goobjooge u waramay wakaalada wararka ee Reuters ayaa waxa u sheegay in u arkaayay 6 baas kuwaas oo isaga baxaayay magaladaas.
Magaladaas ayaa waxa lagu wada in gurmad looga qaadayo go’doonka looga saro 8,000 oo ah dadka rayidka ah ee degana magaladaas iyo sidoo kale 800 oo ah dagaalayahanada mucaaradka oo dagaalka kula jiro xukumadda madaxweyne basher al asad.
Magaaladan daraya ayaa ka hor inta uusan dalkaas ka qarxin dagaalada sokeeye waxa ay hoy u ahayd 250,000 oo qof.
Hay’ada qaramada midoobay ee ku baqday in magaaladan go’doonka laga qaado ayaa waxa ay sheegtay in aan laga qeyb galinin heshiiska magaladaas go’doonka looga qaadayo sida lagu sheegay warbixin u soo saaray xafiiska masuulka hay’ada qaramada midoobay ugu qaabilsan waddankaas Syria Staffan de Mistura.
De Mistura oo maalinta shalay ahayd kulan la qaatay xoghayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka ruushka Sergey Lavrov kulankaas oo ka dhacay magaalada Geneva ayaa waxa u Mistura sheegay in xalada magaladaas go’doonka ku jirtay mudada 5-ta sano ah in ay tahay mid aad u xun isla markaasina laga deyrinaayo.
← Qaramada midoobay oo difaacday go’anka dalkan Kenya ee dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed
Dadka Kenyanka ah ayaa sheegay in dawladd goboledyada ay saameyn weyn ku yeeshen dalka →
1 thought on “Magaalada daraya oo ay isaga baxayaan dadki ku dhaqana”
me also commenting at this place. http://bing.net/